VaJuly Moyo Votarisirwa Kupa Rekupedzisira Pakuti Harare Yokwereta Here Mari Inodarika Bhiriyoni yemuNyika
Kubvumbi 17, 2022
Gurukota rezvematunhu Vauly Moyo
Gurukota rinoona nezvematunhu VaJuly Moyo vave kutarisirwa kupa rekupedzisira pachikumbiro chekanzuru yeHarare chekuti ikwanise kupihwa mukana wekukwereta mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mana emunyika. Nyaya iyi yaunza kusawirirana pakati pekanzuru nemasangano anomirira vagari.
Vakafanobata chigaro chameya wemuHarare VaStewart Mtizwa vebato reMDC- Alliance vaudza Studio 7 kuti sezvinodiwa pamutemo vakaendesa kuhofisi yaVaMoyo chikumbiro chavo pamwe nezvakataurwa nevagari. Hatina kukwanisa kubata VaMoyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa.
VaMtizwa vaatti kanzuru yavo haikwanise kuita mabasa makuru kana vakasapihwa mvumo yekukwereta mari iyi.
Vagari vainge vapihwa kusvika musi wa 7 Kubvumbi kuti vape pfungwa dzavo uye vakawanda vari kutsika madziro.
Mutungamiri werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba varamba zviri kutaurwa naVaMtizwa.
Asi mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vatiwo zvakakosha kuti kanzuru ikwereteswe mari iyi.nekuti izvi ndizvo zvinoiutwawo nemakanzuru ose pasi rino kana vachida kuita mabasa makuru.
Izvi zvapikiswa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomiririra vagari reCombined Harare Residents Association VaReuben Akili vati kanzuru haibude pachena kuti yawana marii pazvirongwa zvakafanana nekubhadhariswa kwevanhu mari dzekumbosiya motokari muguta reHarare.
Pamutemo, kana kanzuru ichida kukwereta mari inofanira kutanga yagara yobuda nechisungo chinozotambirwa nameya. Kanzuru inozozivisa vanhu kuburikidza nekushambadzira mumapepanhau uye vanhu vane mazuva makumi maviri nerimwe kuti vapindure.
Kana izvi zvapera chikumburo uye zvinenge zvataurwa nevanhu zvinozoendeswa kugurukota rezvematunhu kuti rione kuti kanzuru yebvumidzwa here kana kuti kwete kukwereta mari.